Ngokuvamile ungahle uhlangabezane nesimo lapho awukwazi ukuzishayela nabangani kanye nomndeni kwi eziningi "megaphone". "Umkhawulo uxhumano" - isigijimi esifana uhlelo okuzenzakalelayo ngemva Ukudayela kusho ukukhuluma enye inhlangano okwamanje akunakwenzeka. Nge lokho kungenziwa exhunywe nokuthi ungahlanganyela kanjani kulesi simo, sichaza kulesi sihloko.
Lapho nokukhawulela zokuxhumana "megaphone" lingasethwa?
Ukungabi nakwenzeka kwento ukubeka noma ethola uhlobo oluthile usocingweni-100% amacala ngenxa yokuthi umsebenzisi isebenze ukuvinjelwa elihambisana ku egumbini. Kwenze umsebenzisi ayengakwenza, ngayodwana ngokufaka inhlanganisela phawu yokufona noma ngokusebenzisa uchwepheshe service kwamakhasimende. Iphuzu elibalulekile lokuthi ukufakwa imikhawulo izingcingo ezenziwe abasebenzi asekela kuphela ngemva zokuqinisekisa womnikazi. Ngakho, kungenzeka ukuthi lizoxhunywa umkhawulo. Kusho ukuthini? "MegaFon" kwenza kube nokwenzeka ukuba afeze noma isiphi isenzo nenani kuphela umnini wayo.
Kungani umkhawulo ukuxhumana "megaphone"?
Umbuzo ukuthi kungani akunakwenzeka ukuxhumana abanye umuntu noma uphendule ucingo olungenayo, avame kwenzeka kubantu abangakaze bebhekana "Ukuvimba ikholi" inkonzo. Ngosizo lwawo, unganciphisa reception noma ngokuqondile shayela uhlobo oluthile. Ukuze lokhu kungaba wusizo? Le sevisi kuyoba iyisibusiso kulabo ababhalisile abahamba eholidini kwelinye izwe, futhi ngalesi sikhathi ufuna ukuvala amathuba wamukela ucingo. Njengoba izindleko kuqhathaniswa eliphezulu uzulazula izingcingo ezenziwe futhi wathola, lesi sifiso ngempela kunengqondo. Futhi, kungenziwa agibele amahhashi futhi kwezinye izimo lapho kuyadingeka ukumisa yiluphi uhlobo lokuxhumana. Ngokwesibonelo, kungase kube okubaluleke abazali abafuna ukugwema bhala-offs imali ngokuthumela imilayezo premium rate Izinombolo ingane yabo (ukuvinjelwa enjalo ingasethwa nge iselula).
Incazelo kanye netimo tekusebenta "Ukuvimba ikholi"
Uhlu ezikweletini kwanoma yimuphi umqhubi mobile has eziningana izinkonzo eziyisisekelo futhi enikeziwe ababhalisile mahhala. "MegaFon" inkampani nayo iyathinteka kulokhu. Sicabanga isevisi ekuvumela ukuthi wena ukusetha kuvinjelwe izinhlobo ezithile ukukhulumisana, ifakwa uhlu olunjalo. Ukuqalisa umkhawulo kungaba kwenziwe ngokuzimela isikhokhelo ngokufaka imiyalo ezifanele noma ukwesekwa onguchwepheshe. Kumele kukhunjulwe ukuthi kungenzeka ukuthi icala ngoba inkonzo ngokusebenzisa "megaphone" abasebenzi. Uxhumano kungaba umkhawulo izinhlobo zalo ezilandelayo:
izingcingo eziphumayo (izingcingo zendawo, obiza ezweni) - Ikhodi 33;
Izingcingo ezingenayo (zonke izingcingo) - Ikhodi 35;
izingcingo zomhlaba jikelele - ikhodi 331;
izingcingo eziphumayo e uzulazula (amakholi avinjelwe wonke amagumbi, ngaphandle Russian) - ikhodi 332;
namakholi angenayo ngenkathi izula (zonke izingcingo) - ikhodi 351.
Ukuze uxhumano kwanoma iyiphi ukuvinjelwa izimo ezilandelayo kumele kwenziwe:
izinombolo hhayi kusebenze "call ukudlulisa" (uma ikhona, kufanele uqale ukhubaze bese ufake sokuvinjelwa, ngaphandle komlandu, uma call ukudlulisa siye sabekwa ngu-opharetha);
for uhlobo ngalunye zokuxhumana ngesikhathi lingasethwa mngcele owodwa kuphela (ngamanye amazwi, ngenxa namakholi angenayo naphumayo ngesikhathi esifanayo ongasebenza kuphela eyodwa ukuvinjelwa; yesibili usula isilungiselelo sangaphambilini).
Ukuqalisa kokuvinjelwa isibopho
Ukwenza kusebenze isevisi itholakala kubo bonke ababhalisile of "megaphone". Umkhawulo uxhumano kungaba ngasiphi isikhathi, khubaza ezibangelwa yilokhu kuvinjelwa bakhiqiza njengoba kudingeka. Ukuphathwa kwamakhasimende ewusizo iphasiwedi ekhethekile (kubo bonke ababhalisele ngokwakhona efakwe njengoba inhlanganisela - 0000) kanye amakhodi uhlobo zokuxhumana ngamunye, ukuhlinzekwa zazo kungenzeka ukwenza kusebenze kuvinjelwe (ohlwini).
Ukwakha kwezithibelo, kufanele ufake umyalo efonini * Ikhodi yesevisi * iphasiwedi Ukuphathwa kwesevisi #. Ungakwazi futhi ukuthi uhlele imikhawulo inombolo kohlobo oluthile izingcingo (isib, i-SMS imiyalezo - ikhodi 16, ukuthola futhi ukuthumela izikhahlamezi nokunye). Kulokhu, umyalo ukusetha kokuvinjelwa ngeke ilungiswe kancane: * Ikhodi yesevisi * iphasiwedi * hlobo lwenkonzo lokuphatha ikholi #. Ukuqalisa umkhawulo kwenzeke e imizuzu 10-15.
Ingabe kufanele ngingene isicelo "megaphone" ukuze uvale ochwepheshe lenkampani? Umkhawulo uxhumano, indlela ukuwukhubaza? kungase kuphakame eminye imibuzo efanayo ukuze ababhalisile abadinga ukuvuselela kokulethwa kwezinsizakalo ukuhlola ukuvinjelwa. Khubaza Ukuvimba akulula njengoba yokuxhuma ke. Ukuze wenze lokhu, mane nje faka inhlanganisela elandelayo ocingweni: ikhodi yesevisi # * iphasiwedi Ukuphathwa kwesevisi #. umyalo ezinjalo ingasetshenziswa uvale yokuvinjelwa nohlobo locingo (bheka uhlu oluphelele ucingo izinhlobo kungaba kuwebhusayithi esemthethweni inkampani "megaphone").
Ukushintsha iphasiwedi Ukuphathwa kwesevisi
Iphasiwedi ukuthi isetshenziswa ngokuzenzakalelayo yokuxhuma / nokunqamula sokuvinjelwa, kungashintshwa ngumsebenzisi. Lokhu kuzovumela ukuvikela ucingo umzamo okungagunyaziwe ukusevisa abanye abantu ukulawula. Ukuze ufake iphasiwedi entsha, sebenzisa inhlanganisela: ** 03 * 330 * iphasiwedi yamanje * entsha iphasiwedi #. semthethweni kwalo akanamkhawulo (kuze izinombolo ngokulandelana ukuba owethulwa). Nokho, uma ufaka inhlanganisela ukushintsha iphasiwedi, wenza iphutha kathathu ke ukusetshenziswa amasevisi ukufakwa ukuvinjelwa isixhumanisi ngeke kutholakale. Wokuvula kungenzeka kuphela uma uxhumane nomnikazi ehhovisi kuyinto SIM khadi kanye passport yakho.
Uma uphinda ushayela leyo nombolo "megaphone" uthi: "It is ukuxhumana umkhawulo" ke nge awokuthi singasho ukuthi iqembu lenze kwasebenza isevisi "Ukuvimba ikholi". Ngokuzimela umnikazi we-SIM khadi Ungathola ukutholakala ukugwenywa technical support onguchwepheshe (ngenombolo 8-800-550-05-00) obakhathalelayo. ukuphathwa Izikhungo kungaba kwenziwe isikhokhelo, kanye ngokuseseka onguchwepheshe. Ngemva ukungaqaliswa yokuvinjelwa sizokwazi kabusha ukusetshenziswa tinsita tekuchumana endabeni "megaphone". Umkhawulo uxhumano kungaba umnikazi egumbini, okuyinto has a iphasiwedi siqu ukuze uphathe le sevisi. Kunconywa ukushintsha okuzenzakalelayo esabekwa izinombolo ngokulandelana ukuze kuqinisekiswe ukuphepha ekamelweni lakho.
Inani virtual ukuthola i-SMS kanye izingcingo: zokuxhumana ngaphandle emingceleni
Indlela "Beeline" ukuxhuma "inkokhelo Lesithembiso" bebodwa?
Jobe Incazelo uthisha ekilasini esikoleni i-GEF
Ukuhlehlela ukwelashwa ngamathumba ekhaya
BBC ukhilimu: nokubuyekeza amakhasimende. BBC okhilimu Phezulu
Hotel Royal Park 4 * (Bulgaria, "Elenite"): izithombe kanye nokubuyekeza